FSX / FSX: Ghaat ụzụ Nsogbu
ajụjụ FSX / FSX: Ghaat ụzụ Nsogbu
2 afọ 4 ọnwa gara aga #75 by Gh0stRider203
Na-FSX / FSX: Ghaat ịbụ a mgbu? Ihe nnọọ aga nri? Nke a bụ ebe na-ajụ pụọ na gị ọrụaka nsogbu! Ọ ga-abụ chinchi, ugbo elu, mebere kokpiiti, ihe ọ bụla ...
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: sruble
2 afọ 4 ọnwa gara aga #101 by varaciro
nke ụdị okwu ị na-izute?
2 afọ 4 ọnwa gara aga #113 by Rolando
mgbe i na-amalite fsx, i nwere na-klick ewepụ ozi: ndudue nke initialisation nke Concorde British, na mmehie nke 2 sceneries. otú m nwere ike saa a 3 nsogbu?
2 afọ 4 ọnwa gara aga #115 by Gh0stRider203
Rolando dere, sị: mgbe i na-amalite fsx, i nwere na-klick ewepụ ozi: ndudue nke initialisation nke Concorde British, na mmehie nke 2 sceneries. otú m nwere ike saa a 3 nsogbu?
M nnọọ n'aka na ihe njehie ozi gị na-, ma ọ fọrọ nke nta na-ada ka i nwere otutu mbipụta nke ugbo elu arụnyere. Iwepụ 1 nke ha ga-edozi.
2 afọ 4 ọnwa gara aga #118 by Rolando
Daalụ maka gị azịza. Amaghị m, otú e si eme na. M mere bubatagharịa Conncords ọzọ, ma ndị installer mere n'ụzọ ziri ezi wepu arụnyere version tupu ọhụrụ wụnye. Ihe bụ nsogbu bụ otu. Ma ọ bụ ị na-eche na m ga-deinstall na Concords kpamkpam na mgbe Akwajuru ha?
2 afọ 4 ọnwa gara aga #119 by Gh0stRider203
Rolando dere, sị: Daalụ maka gị azịza. Amaghị m, otú e si eme na. M mere bubatagharịa Conncords ọzọ, ma ndị installer mere n'ụzọ ziri ezi wepu arụnyere version tupu ọhụrụ wụnye. Ihe bụ nsogbu bụ otu. Ma ọ bụ ị na-eche na m ga-deinstall na Concords kpamkpam na mgbe Akwajuru ha?
M ga-iwepụ na Concorde (s) kpamkpam, mara FSX ahụ ma ọ bụrụ na ọ na-enye gị na ozi, na ọ bụrụ na ọ bụghị, mgbe ahụ wụnye ya na-ahụ ihe na-eme.
2 afọ 4 ọnwa gara aga #120 by Rolando
Daalụ maka gị echiche. M mere ndị na-esonụ:
- iwepụ concordes kpamkpam (a dịghị ahụ ha na fsx), ma ozi bụ otu!
- i gbalịrị Malitegharịa ekwentị ahụ na kọmputa, ma otu ozi
- i ebudatara concordes ọhụrụ na arụnyere ha, otu ozi
Iju, ọ dịghị? M don't mara otú m nwere ike ihichapụ na-ezighị ezi ozi.
2 afọ 4 ọnwa gara aga #122 by Gh0stRider203
Ị enyocha na Aircraft folder iji jide n'aka na ha na-na na na-arahụ?
(Na MY ikpe, ọ bụ B: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft Games \_ Microsoft Flight Simulator X \_ SimObjects \_ ụgbọelu)
Ndị ọzọ karịa na m na-amaghị ihe na-agwa gị.
ị pụrụ biputere a nseta ihuenyo nke njehie? nke nwere ike inyere Me a bit.
BTW .. na-ekele gị ndidi na nke a. Amaara m na ị eleghị anya dị nnọọ ka nkụda mmụọ (Ọ BỤRỤ na ọ bụghị ndị ka) karịa Me. Ọ dịghị ihe m kpọrọ asị karịa stof adịghị arụ ọrụ.
2 afọ 4 ọnwa gara aga #133 by Rolando
ozi bụ German (m Swiss), ya kpọmkwem pụtara: ndudue nke initialising nke concorde British. ma ọ bụghị a nnukwu nsogbu n'ihi na ụgbọ elu ofufe n'ụzọ zuru okè. i naanị a click ọzọ mgbe i na-amalite fsx ...
otú ahụ, na-ekele gị nke ukwuu maka enyemaka gị. ma ọ bụrụ na ị ga-nwere ihe ngwọta e mesịrị, biko kpọtụrụ m.
Rolando, a swiss ndụ na Thailand ...
2 afọ 4 ọnwa gara aga #134 by Gh0stRider203
Nke Concorde ka ọ bụ? ọ bụ onye na ị nwetara site ebe a?
dị ka ya ịnọ na-German, nke ga-agaghị abụ nsogbu akpa ọchị m nwetara a enyi na-ekwu okwu were were German ^ _ ^
Oge ike page: 0.486 sekọnd